China Carbopol 941 mveliso kunye nabenzi | Yinuoxin
Igama: ICarbomer 941 iCarbopol 941
ICarbomer 941 Carbopol941 yipolyacrylate Polymer enqamleza umnqamlezo kunye nepropathi ehamba phambili yokuhambahamba okumde. Inika ukucaca okugqwesileyo kwiigel kwaye inika i-emulsions esisigxina kunye nokumiswa kwi-viscosity ephantsi, kwaneenkqubo ze-ionic. I-Carbopol941: ukuhamba ixesha elide, i-viscosity ephantsi, ukucaca okuphezulu, ukumelana ngokulinganayo kwi-ion kunye nokuxhathisa kwe-shear, efanelekileyo i-gel kunye ne-emulsion.
Ipropathi yokuhambahamba okude okugqwesileyo
Ukusebenza ngokugqibeleleyo kukumodareyitha kunye nokuxinana okuphantsi.
Amayeza okuthambisa, iikhrim kunye neegel
Iinkqubo ze-ionic eziphakathi
Uhlobo olucetyiswayo lwe-0.2 ~ 1.5%.
Ukusasaza i-NM-Carbomer941 ngokupheleleyo, kufanele ukuba icothwe kwaye ihluzwe ngononophelo ukusasazwa phakathi ngelixa umxube unyanzeliswa ngokukhawuleza ukunqanda ukwenziwa kweqhuma; Umxhubi wereyithi ephezulu kakhulu kufuneka aqeshwe ngononophelo ukuthintela ukulahleka kwe-viscosity.
I-viscosity efanelekileyo inokufezekiswa kumanqanaba e-5.0 ~ 10.0; Ukufezekisa ukuqina okuphezulu, iCarbomer941 kufuneka ithathelwe ngaphandle;
Kwinkqubo ye-hydoalcoholic, kufuneka kukhethwe ngononophelo oluchanekileyo ngokusekwe kwinani lotywala ekufuneka lifakwe kwijeli.
Ukucheba ngoomatshini-emva kwe-carbomer neutralization, ukuqhubeka okunyanzelekileyo okanye ukucheba okuphezulu kunokubangela ukulahleka kwe-viscosity
Ubukho bee-ion - ii-electrolyte zinokunciphisa ukusebenza ngokuqina
I-Ultraviolet-ixesha elide le-ultraviolet irradiation iya kwenza i-carbomer gel ingathathi ntweni kwimitha ye-ultraviolet xa i-viscosity yayo incitshiswe yi-pH> / = 10.
Utshintsho lobushushu - i-carbomer gel ayichaphazeleki bubushushu.
I-Microorganism carbomer ayixhasi ukukhula kwesikhunta sebacteria, kwaye ukukhula komngundo webacteria akuchaphazeli iipropathi zejel. Umthamo oqhelekileyo we-0.2-0.4% unokutshintsha i-3-7% ye-emulsifier yesiqhelo. ICarbomer polymer phantse ayinazo iipropathi ezisebenzayo, ke ukongeza i-0.1-0.5% ye-surfactant enexabiso eliphantsi le-HLB inokuhlengahlengisa amasuntswana esigaba seoyile ukuba abe mncinci, ukulungiselela iimveliso ezimhlophe nezicocekileyo zekrimu.
Egqithileyo ICarbopol 934
Okulandelayo: ICarbopol 980